'किताब नपढी गतिलो लेखक हुन सम्भव छैन'
२o७६ जेठ ८ बुधबार / Wednesday, May 22, 2019
२o७५ मङ्सिर १५ शनिबार
२०७४ सालमा पहिलो उपन्यास पैताला’ सार्वजनिक भएपछि लेखक गनेस पौडेल रोचक विषयवस्तु र पृथक् शैलीका कारण समीक्षक तथा पाठकहरूबीच लोकप्रिय बन्न पुगे । लामो समयदेखि अखबारी लेखनमा समेत आबद्ध रहँदै आएका उनी पोखरामा बस्छन् । प्रस्तुत छ खरीबोटको लागि अनुप जोशीले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नयाँ स्वादको ’पैताला’बाट पाठकहरूमाझ राम्रैसंग स्थापित हुनुभयो । अब अर्को उपन्यास कहिले आउँछ?
उपन्यास नआउन पनि सक्छ । दुइटा उपन्यास ’देजाभू’ र ’भिसी एघार’लेखिभ्याएको भए पनि बजारमा पठाउन मन लागेको छैन । ’देजाभू’ तिब्बती शरणार्थीको संघर्षको कथा हो भने ’भिसी एघार’ पचासको दशकमा भलिबल टिममा रहेका साथीहरुको मित्रताको कथा हो । यी दुबै यति प्रिय भएर बसेका छन् कि अझै एकाध बर्ष यिनको एकल पाठक बनेर बसुँ भन्ने लागेको छ । सायद बर्षान्तमा एउटा कथा संग्रह आउँछ ।
अब आउने पुस्तक पनि ’पैताला’ जस्तै तान्त्रिक शैलीको हुन्छ ?
'तान्त्रिक’’उत्तरआधुनिक’ आदि इत्यादि कुरात पाठकले, समीक्षकले निर्क्यौल गर्लान् । तर सत्य कुरा के हो भने कथावाचन र प्रस्तुतिमा नयाँ प्रयोग भने गरिरहन्छु । म यो मामलामा निक्कै सचेत छु कि मेरो कुनै शैली हुनु हुँदैन । म हरेक किताबमा नयाँ लेखककोजस्तो स्वादमा आउन चाहन्छु ।
तपाईंको उपन्यासमा भेटिने अजीबोगरिब प्रसंगहरू लेख्नको लागि तपाईंलाई कहाँबाट प्रेरणा आउँछ?
मेरो विचारमा आख्यान बाह्य यात्रा हो । कविता भित्री यात्रा । कवितामा ध्यान हुन्छ । आख्यानमा कल्पना । कविताको संवेदनामा सर्जक आफैँसंलग्न हुन्छ । आख्यानमा भने आख्यानकार असंलग्न हुन्छ । म कवि होइन, कथाकार हुँ । मलाई कल्पना नगरी सुखै छैन । मेरो लेखनीको मुल ध्येय नै पराकल्पनाको माध्यमबाट परामनोविज्ञानलाई स्पर्श गर्नु हो । मैले अन्टसन्ट कथा रच्नुको कारण यही हो ।
’पैताला’को कन्टेन्टमात्र नभएर न्यारेशन टेक्निक पनि बिल्कुलै भिन्न छ । कसरी विकासगर्नुभयो त्यस्तो शैली?
मैले नेपालका धेरै आख्यानकारलाई ’कथावाचक’ मात्रै देख्छु । ’कथाकार’ देख्दिनँ । उनीहरुसँग कथा पहिल्यै हुन्छ त्यसलाई आ(आफ्नो शैलीशिल्पले वाचन गर्नु नै तिनको धर्म हुन्छ । मेरो खल्तीमा कहिल्यै कथा हुँदैन किनकी म अर्काको कथा टिप्दिनँ । म कथा टिप्न देशाटन गर्दिनँ । त्यसैले कथाकार र कथावाचक दुबै हुनु मेरो बाध्यता हो । म कथा र वाचन दुवैमा फरकपन खोजिरहन्छु । ’पैताला’ त्यसैको एउटा अभ्यास थियो । मेरो अनुभवमा कथा अनाज हो भने वाचनशैली त्यसलाई भण्डारन गर्ने डालो । म पहिला डालोको बारेमा प्रष्ट हुन्छु अनि त्यसमा खन्याउँदा सुहाउने अनाज खोज्न हिँड्छु ।
पत्रपत्रिकामा तपाईंका लेख आइरहन्छन् । उपन्यास लेखन र अखबारी लेखनमा के फरक रहेछ?
अब हप्तैपिच्छे नयाँ किताब निकाल्ने कुरा त भएन नि ! उपन्यास लेख्न समय लाग्छ । त्यस बिचमा ’गनेस पौडेलले अझै लेखिरहेकै छहै’ भन्ने सूचना दिन म अखबारी लेखन गर्छु । रमाइलो कुरा के भने मैले अखबारका लागि आजसम्म कम्तिमा ५ सय निबन्ध लेखेँ हुँला तर तीमध्ये एउटै पनि कागजमा संकलित छैनन् । भोलि संकलन गरेर छाप्नु पर्यो भने पत्रिकाका आर्काइभ माग्दै हिँड्नु पर्नेछ ।
अखबारी लेखनमा मेरो रुचिको बिषय धर्म, इतिहास र सँस्कृति हो । यसमा म ज्यादै नै तार्किक र यथार्थवादी हुने प्रयास गर्छु । उपन्यासमा मेरो रुचिको बिषय ब्रह्माण्ड, रहस्य, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, मिथकआदि हुन् । म उपन्यासमा कल्पलोकमा हुन्छु ।
तपाईं घुमफिरमा निकै रमाउनुहुन्छ । घुमफिरले तपाईंको लेखनमा कत्तिको प्रभाव पार्ने गर्छ?
निक्कै पार्छ । कथाका अनौठा आइडियाहरु मलाई घुमफिरको बेला फुर्छन् ।
रमाइलो कुरा के भने मैले अखबारका लागि आजसम्म कम्तिमा ५ सय निबन्ध लेखेँ हुँला तर तीमध्ये एउटै पनि कागजमा संकलित छैनन् । भोलि संकलन गरेर छाप्नु पर्यो भने पत्रिकाका आर्काइभ माग्दै हिँड्नु पर्नेछ ।
मान्छेको जीवन के हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
जीवन भनेको सम्झनाहरुको समष्टि हो । स्मृतियोग्य किस्साहरुको निर्माण नै जीवनको खासोखास अभीष्ट हो ।
तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै आनन्द कतिबेला आउँछ?
सबैभन्दा धेरै आनन्द त संभोग गर्दा आउँछ तर त्यस्तो कुरा सबैको हकमा लागू होला । त्यसैले उता नजाऊँ। मलाई मज्जा आउने अर्को कुरा भनेको बाँच्नु हो । मलाई ज्युँदै छु भन्ने आभाष भएको बखत साह्रै आनन्द आउँछ । जिन्दगीलाई नै दाउमा राखेर कुनै काम गर्दामलाई ज्यूँदै छु भन्ने आभाष हुन्छ ।
तपाईंले जीवनमा गर्ने इच्छा राख्नुभएको एउटा कुरामात्र भन्नुपर्दा के छान्नुहुन्छ?
जीवनमा गर्न चाहेका कुरा धेरै छन् । कुनै एउटा रहर रोजेको भने छैन । हतारमा भन्दा मलाई यी ३ मध्येकम्तिमा एउटा काम गरेर मर्न मन छ स् स्काइ डाइभिङ गर्ने,अन्तरिक्षमा जाने, संस्कृत सिक्ने ।
तपाईं धेरै पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ । एउटा लेखकलाई अरु लेखकको पुस्तक पढ़नाले हुने फाइदारबेफाइदाहरू के-के हुन्?
जसरी काम नगरी पैसा कमाउन, लगानी नगरी नाफा निकाल्न,राजनिति नगरी देश बदल्न,सेवा नगरी सन्तुष्टि पाउन, तयारी नगरी परीक्षामा उत्कृष्ट हुनसम्भव छैन त्यसै गरी किताब नपढी गतिलो लेखक हुन सम्भव छैन ।
तपाईंलाई धेरै मन परेका पुस्तकहरू?
मैले मन नपरेको किताबै पढेको छैन ।
समकालीन नेपाली साहित्यमा आइरहेका पुस्तकहरूप्रति तपाईंको धारणा ?
’नेपाली साहित्य’ भन्नाले के बुझ्ने ? नेपाली नागरिकले लेखेको साहित्यभनेर बुझ्ने ? अथवा जुनसुकै देशको नागरिकद्वारा नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्यलाई बुझ्ने ? वा नेपालभित्र बोलिने कुनै पनि भाषामा लेखिएको साहित्यलाई बुझ्ने ? यस्तो ’साहित्यमा आइरहेका’ किताबमा अनुवादलाई मिसाउने वा नमिसाउने ?
मैले मुराकामी, कोहेलोजस्ता लेखकलाई अँग्रेजीमा पढेको हुँ । सुरुमा मलाई ती लेखक कुन देशका हुन भन्ने पनि वास्तै थिएन । त्यसैले मलाई लाग्छ साहित्यको देश हुँदैन, राष्ट्रियता हुँदैन । साहित्य भाषामा लेखिन्छ तर यसको कुनै भाषा हुँदैन ।
अन्त्यमा, राम्रो उपन्यास लेख्न चाहने नयाँ लेखकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
केही भन्दिनँ । सधैँ भन्ने कुरा एउटा छ त्यही भन्छु, लेख्न चाहेर केहीलछारपाटो लाग्दैन । पहिला लेख्नुस् अनि राम्रो भएछ भने राम्रै भयो ।
'सहकारी नियमावली आँउदैमा जादुको छडी जस्तो समस्या समाधान हुदैन, समय लाग्छ'
काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा विविध समस्याहरु देखापरेका छन् । यस क्षेत्र विशेषगरी सहकारी टिक्ने र नटिक्ने तथा बचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित हुन्छ कि हुदैन भन्ने ठूलो चुनौती रहेको
राजनीतिले लेखनमा 'गाइड' गर्दछ : धर्मेन्द्र नेम्बाङ
लामो समयदेखि साहित्य लेखन तथा राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका कवि धर्मेन्द्र नेम्बाङको दोस्रो कविता संग्रह ‘मैले बोल्दा देशको नक्सा हल्लिन्छ’ यही वैशाख १४ गते शनिबार मण्डला थिएटरमा एक कार्यक्रममा बीच
मैले प्रतिस्पर्धा वा व्यापारका लागि कथा लेख्ने होइन : एल. बी. क्षेत्री
चितवनमा बसेर साहित्य लेखन तथा साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका लेखक एल.बी. क्षेत्रीको कथासंग्रह ‘व्रतभङ्ग’को विमोचन वैशाख २१ गते एक कार्यक्रमका बीच प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा हुँदैछ । पुस्तकलाई बीएन प्रकाशनले बजारमा ल्याउन
महिलालाई जिम्मेवारी दिनै कन्जुस्याइँ गरेको अवस्था छ - शशी श्रेष्ठ
काठमाडौँ । काभ्रे जिल्लाको मंगलटार बजारमा जन्मिएकी शशी श्रेष्ठ काठमाडौंबाट नेकपाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । सांसद श्रेष्ठ सांसदको भूमिकासँगै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको भूमिकामा पनि अहिले सक्रिय
प्रचण्ड गर्मीले बाँकेको जनजीवन प्रभावित
एक लाख ८५ हजार अफगान शरणार्थी स्वदेश फर्किए
इन्डोनेसियामा निर्वाचन परिणामको विरोध, झडपमा ६ को मृत्यु
मर्केल र म्याँक्रोसँग पुटिनको फोनवार्ता
पाँचथर हत्याप्रकरणबारे गृहमन्त्री थापाद्वारा संसदमा जानकारी
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा जेष्ठ नागरिकलाई कुर्सी हस्तान्तरण
‘दलहरुले बिर्से शहीदका योगदान’
नेपाली भाषामा एकरुपता ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयद्वारा परिपत्र जारी
कालीगण्डकी डाईभर्सन विरुद्ध स्थानीय तह
जनकपुरधाममा हिमालयन बैंकको ५८औ शाखा सञ्चालन
कपिलवस्तुकी ६ बर्षिय ग्रीष्मालाई बचाउन सहयोगको अपिल
कस्तो अचम्म ! क्रिकेट खेलमा सबै ११ खेलाडीको शुन्य रन...
एम्बाप्पेले दिए पिएसजी छोड्ने संकेत
कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनी टिमको घोषणा, आइकार्डी टिममा परेनन्
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घट्यो
बायर्नबाट रोबेन र रिबेरीको सुखद बिदाई
मैले भने जस्तो भएन भने छोडीदिन्छु – जिनेदिन जिदान
मेसीको नयाँ रेकर्ड, छैठौ पटक जिते पिचीची ट्रफी
गोन्जालो हुगैनलाई चेल्सीले युभेन्टस फिर्ता पठाउने
विश्वकप खेल्ने टिमबाट बाहिर भएपछि जुनैदको यस्तो विरोध !